Muxuu Madaxweyne Mustafe u rabaa in uu ka Takhaluso Liyu Booliska? – Xeernews24
Muxuu Madaxweyne Mustafe u rabaa in uu ka Takhaluso Liyu Booliska?
29. Mai 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Awooda Deegaanka uu MW Rabo in uu Federaalka ku Wareejiyo
Muxuu Musstafa u rabaa in uu ka Takhaluso Liyu Boliska? Waa sua’al aan jawaabteeda u dhabo galay.
Runti Liyu Bolisku tacadiyo badan ayuu ka geystay Deeganka Soomaalida iyo in ka durugsanba. Taas waan isku wada raacnay.
Hadaba iyada oo arintaas lagu soo gabbanayo ayaa madaxda Jigjiga dardar galisay sidaa Liyu Bilayska Deegaanada looga takhasus lahaa.
Arintaasi welba hadeer waxay ku egtahay oo kaliya heer laga doodo.
Intaa wixii dhaafsana dhowr shey ayaa inno cad.
Hal usbuu ka hor waxa doolatusad baaxad leh sameeyey qowmiyado Walyta oo gaardi xoogan iyo dhoola tusad ciidamadeeda Liyu Boliska inala wadaagtay.
Dawlad Deegaan Oromo oo hada ku guda jirta xoojinta, balaadhinta, iyo casriyeynta Liyu Bolliskeeda. Intii uu Abiy Axmed PM noqday, waxa Oromia tababartay in ka badan 7,000 oo askari. Waxa dhawaan la soo xirayndoonaa 5,000 oo kale. Hadaba Oromia uma eka deegaan ka takhalusaya Liyu Booliiskeeda.
Gobolka Tigree waxa uu leeyahay 100,000 oo askari in ka badan oo aad u tababaran.
Gobolada kalena waa la mid. Intaa waxa dheer in wasiirada difaaca ay sheegtay in loo baahanyahay mabda isu tola hayadaha amiga dalka oo dhan, meelna mabda ka wada qaataan.
Waxay xustay in ciidamada gaarka ah ee deegaanadu leeyihiin ay sharci yihiin. Jamal Diiriya arintaas wey ka hoos baxday isaga oo ku dootamay in aanu jirin wax sharci oo lagu aasaasay. Waxa uu mala awaalayey in CMC iska samystay.
Hadaba, Mustafa iyo xulifada u shaqsysaa ma baab’in karaan Liyu Boolisyada dalka oo dhan?
Jawaabtu waa maya. Haday sidaas tahay, maxay uga dan leeyihiin dooda ay isaga iyo Jamal Diiriye wadaan ee Amxaarada la dhex wareegayaan?
Si aan jawaabta u helo, waxaan dib u fiiriyey axdiga federalka Itobiya u dajisan. Waxa ii soo baxday waxa afka qalaad loo yaqaan loophole ama godalool wax lagaga badalo karo Liyu Boliska deegaanka.
Labada qodob ee 50 & 52 ayaa qeexaya awooda ay dawlad deegaanadu leeyihiin in ay ayagu dhistaan haykalada dawliga.
Waxaan awoodaasi ku hoyataa ama gacanta ugu jirtaa barlamanka deegaanka.
Xisbiga maaha; madaxweynahana ma aha. Waa golaha wakiilada. Halkaasay kana bilaabmataa kuna dhamaataa.
In mudo ah hada wax barlamaan ahi kama jiro Dawlad deegaanka. Waa iska baba’ay. Haduu jirona waa maqaar saar.
Awooduna waxay hoostaalaa xisbi Addis Ababa lifaaq ku ah oo SDP layidhaa oo gacan yare u ah EPRDF.
Mar hadaanu barlamaan wax ku ool ihi jirin, Mustafane weli aanu ka korin dhibtii soo gaadhay iyo cadhadiisii ku aadaanay Liyu Boliska, shaxadan ayaa la wataa.
Hadii aan la baab’in kareyn Liyu Booliska dalka oo dhan, waxa Mustafa ku talo jiraa in Liyugs Soomaalida laga takhaluso iyada oo sharci loo marayo.
Qodobka 50. Farqigiisa 9 waxa uu fasaxayaa in Dawlad Deegaanku ay xaquuqaheeda ku wareejinnkarto siina karto dawlada dhexe. Haday sidaa tahay, awood ayuu u leeyahay Mustafa in uu weydiisto dawlada dhexe in aminga deegaanka la wareegto, Laguna wareejiyo deegaanka isaga oo cuskanaya qodobka 50.
Waxa waayadan Soomaalinimada ka baxsan ee aynu la yaabanayn arinta ayaa ka dambeysay – in Qodobka 50 la cuskada oo laweydiisto Abiy in amiga deegaanka lagu wareejiyo dawlada dhexe.
Aritani waa xadgudub ku aadan aayaha deegaanka sidaas darteed in aynu ka foojignaano si gaar ahna aan ula socono.
In wacygalin arintan ku aadan deegaanka oo idil laga bilaabo.
In hadii uu rabo Mustafa in uu Liyu Bolis reform ama dib u habyn ku sameeyo la isku garab taago, laakiin aan loo ogolaan in uu cuskado qodobka 50.
In aynu naftood hurayaashi 30 sano usoo dagaalamay iyo maliishooyinka degmooyin la isku dhafo, lagana dhigoxoognka mid ah ama la wareega amiga SRS.
ONLF asker sharf leh oo umadan naftooda u hurtay ayey leedahay. Yaa uga lexejeclo badan dadka deegaanka.? Ma nin Goojaam ama Walaga ka yim? Abadan!
Inba yaan la ogolaan in awooda deegaanka ha yarasato ama ha badnaato federalka loo wareejiy.
ONLF xil gaar ah ayaa ka sasren ilaalinta awoodaha umaddu leedahay, shaqsi iyo koox kaliyana in loo dhaafa waa qalad.
Waxa Qoray Faysal Cabdi Rooble
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/11/75-5.jpg 720 540 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-05-29 01:05:112019-05-29 01:05:11Muxuu Madaxweyne Mustafe u rabaa in uu ka Takhaluso Liyu Booliska?
Dib u Milicso Jaale Siyad Barre (AUN) iyo reer Hargeysa maxay qabsadeen Siyaad... Safiirada Soomaalia ee dalalka Masar & Suudaan oo si deg dega ah loogu...